Real Madrid oo badelka Bale u aragta Xiddigan…(Waa haddii ay weyso Neymar) – Gool FM
Real Madrid oo badelka Bale u aragta Xiddigan…(Waa haddii ay weyso Neymar)
Byare March 6, 2018
(Madrid) 06 Maarso 2018. Real Madrid ayaa baryahaan in badan lala xiriirinayay xiddiga ugu qaalisan ee Neymar iyadoona dooneysa inay ku badesho booska Gareth Bale.
Warsidaha Diario Gol ee dalka Spain ayaa warinaya in kooxda Zidane ay ka fikireyso in Christian Pulisic uu badel u noqon karo laacibka reer Welsh haddii ay ku guuleysan waayaan baadi goobka ay ugu jiraan xiddiga reer Brazil.
Laacibkii hore ee Tottenham Bale ayaa la filayaa inuu isaga tagi doono caasimada Spain marka uu dhammaado kal ciyaareedkan.
Inkastuu Neymar yahay bartilmaameedka koowaad ee Los Blancos, misane kooxda ayaa ku fikireysa inay u dhaqaaqdo da’yarka Borussia Dortmund oo lagu qiimeeyay ilaa 80-milyan oo euro waa marka ay ka quustaan Neymar.
Messi mise Ronaldo? Yuu qaab ciyaareedka ka shabbahaa wiilka Muslimka ah ee ruxay dunida
Ronaldo weyne (R9) oo u muuqday gabi'ahaanba mid aan la aqoonsan karin!